ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ “ သူက ကွမ်းယာဆိုင်မှာ ဆေးလိပ်နဲ့ ကွမ်းယာတွေ ဝယ်ပြီး ပိုက်ဆံမပေးဘူးလို့ ကြားပါတယ်။ ပိုက်ဆံတောင်းလို့ မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ငါက တပ်မမှူးတပည့်၊ ငါ့ဆီက ပိုက်ဆံတောင်းဝံ့သလား ဆိုပြီး ဈေးဗန်းကို မှောက်ချပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုင်ရှင်မိန်းကလေးကိုလဲ ရိုက်ပါတယ်၊ အရက်လဲ သောက်စားထားပါတယ်” ဟု အနီးရှိ ဈေးဆိုင်ရှင် ဦး‌မောင်‌ညွန့်‌က ‌ပြောသည်။ ထိုသို့ကျူးလွန်သည့်အတွက် မြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ယူစစ်မေးခဲ့ရာ ၎င်းမှာ စကခ(၁၅)မှ တပ်သားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တပ်သို့ ဆက်သွယ်အပ်နှံခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခဲ့သော ဘင်္ဂလီများအား ထိရောက်စွာအရေးယူရန်လို
3 responses to “မူးယစ်ယမ်းကားပြီး မိန်းမပျိုတစ်ဦအား ရိုက်နှက်သူ စစ်သားတစ်ဦးအား အရေးယူ‌ပေးရန်‌ ‌တောင်းဆိုမှု ဖြစ်‌ပွားခဲ့”	ark
Reply	ရ ခိုင် ပြည် နယ် တွင် ရ ခိုင် အမျိုး သ္မီး များအား စော် ကာ ခြင်း ကို လူ့ အခွင့် အေ၇း ချိုး ဖေါက် ခြင်း အဖြစ် မည် သည့် UN အဖွဲ့ အစည်း ၊ မည် သည့် မီ ဒီ ယာ ၊ မည် သည့် မြန်မာ တိုင်း ရင်း သား အမျိုး သ္မီး အဖွဲ့ ဆို သူ ကမျှ ထုတ် ဖေါ်ေ၇း သား ပြော ဆို ခြင်း မ ရှိ ကြ ခြင်း မှာ ရ ခိုင် လူ မျိုး များ နေရာ တွင် ဘင်္ဂလီ မူ ဆလင် လူ လိမ် များ ကို ရ ခိုင် လူ မျိုး များ အဖြစ် အစား ထိုး နေရာ ပေး ထား ကြ သောောကာင့် ဖြစ် ပါသ ည်။ ပြည် တွင်း ၊ ပြည် ပ မှ မြန်မာ ပြည် ကို ရောင်း စားနေကြ သည့် သေ လျှင် တီ ကောင် မျှ ပင် မဖြစ် တော့ မည် သူများက ရ ခိုင် လူ မျိုး များက မိမိ တို့ ကိုယ် ကို ရ ခိုင် သား များ ဟု ပြော ဆို နေ ကြ သ်ည့ စကား အ တိုင်း ဘင်္ဂလီ မူ ဆလင် များက ခေါ် ဝေါ် ခဲ့ သဖြင့် အသံ ဝဲ ၍ ရ ခိုင် သား အစား ရို ဟိုင် ဂျား / ရို ဟင် ဂျာ/ ရို ဟုန် ဂျာ / ရို ဆိုင် ဂျာ စသည် ဖြင့် ခေါ် ဝေါ် ခဲ့ ကြ ခြင်းသာဖြစ် ပါသ ည်။ ထို အခေါ် အဝေါ် များ ကို ဝန် ကြီးချုပ် ဦး နု တက် ခါ စကာ လ တိုင် အောင် ဘင်္ဂလီ စကား သာ ပြော တတ် သည့် ဘင်္ဂလီ မူ ဆလင် များ က ခေါ် ဝေါ် သုံး စွဲ ကြ ပါသ ည်။ အကြောင်း မှာ ဘင်္ဂလီ စကား ပြော နှင့် စာ အေ၇း အသားတွင် ရ၊ ခ၊ သ ဟူသည့် အက္ခ ရာ နှင့် အသံ လုံး ဝ မရှိ ဘဲ ဝေါဟာရ နဲ သောကြောင့် ထို အသံ နှင့် အနီး စပ် ဆုံး စကား များကို သာ အစားထိုး သုံး နုန်း ကြ ပါသ ည်။ ထို့ ကြောင့် ရ အစား ရို ကို ၄င်း ၊ ခိုင် အစား ဟိုင်/ ဟုန် / ဟင်/ ဆိုင် နှင့် သား ( လူ မျိုး) ကို မူ ကား ဂျာ / ဂျား ဟူ ၍ ခေါ် ဝေါ် ခဲ့ ကြ ပါသ ည်။ ထို အေ၇း အသားများကို လည်း ရ ခိုင် ရှင် ဘု ရင် မင်း များအုပ် ချုပ် ခဲ့ သည့် သမိုင်းများကို မှတ် တမ်း တင်ေ၇း သားကြရာ တွင် သုံး နုန်း ရေး သား ထား ခဲ့ ကြ သည် ကို တွေ့ ရှိ ကြ ရ ပါ သည်။ အထူးသဖြင့် ၁ ၆ရာ စု အကုန် ၊ ၁၇ ရာ စု အစ ခေတ် စာပေး များတွင် တွေ့ ရှိ နိုင် ပါသ ည်။ သိုက သော် ထို ရှင် ဘု ရင် အား လု့းတို့ သည် ဗုဒ္ဓ ဘာ သာဝင် ရ ခိုင် လူ မျိုး ရှင် ဘု ရင် များသာဖြစ် ကြ ပါသ ည်။
Reply	အမျိုး သ္မိး များကို မူးနေ သည် ကို အကြောင်း ပြ ကာ သတ် ပုတ် လု ယက် ခြင်း သည် အမျိုး သ္မိး လူ့  အခွင့် အေ၇း ချိုး ဖေါက် ခြင်း ဖြစ် သည်။ ရန် ကုန် တွင် ရုံး ဖွင့် ထား သည့် မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုး ရ ကို ကုယိ် စာြးု့ သည့် ရ ခိုင် သား ငဖါး ဦး ရွှေ မြ ကို စာေ၇း တိုင် ကြား လိုက် ပါ ။ဘာ မျှ မ လုပ် ပေး သော် လည်း နောင် တါင် သက် သေ အထောက် အထား အပြစ် ကူ၏ိုး ကား ၍ ရ ပါ သည်။